Real Madrid Oo Oo Qorshaynaysa In Ay Paul Pogba Lasoo Wareegto
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo oo Qorshaynaysa in ay Paul Pogba Lasoo Wareegto
May 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay wali si xor ah kula soo saxiixan karto Paul Pogba xagaagan.
Qandaraaska ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United ayaa dhacaya dhamaadka bisha June, waxaana uu u muuqdaa mid ku dhow inuu ka tago kooxda 20-ka jeer heysata horyaalka Ingariiska isagoo raadinaya daaq cusub.
Juventus iyo Paris Saint-Germain ayaa la rumeysan yahay inay yihiin kuwa ugu cadcad xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska, halka warbixin dhowaan soo baxday ay sheegtay in Manchester City ay ku fikireyso inay keento Etihad Stadium.
Real Madrid ayaa muddo dheer lala xiriirinayay xiddiga ku guulaysta koobka adduunka inkasta oo Los Blancos lagu eedeeyay in ay qaboojisay xiisaheeda horaantii sanadkan si ay diirada u saarto saxiixa xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe .
Pogba hadda lama aaminsana inuu yahay bartilmaameedka mudnaanta leh ee kooxda heysata horyaalka Spain, laakiin sida laga soo xigtay Sport , kooxda Carlo Ancelotti ayaan weli meesha ka saarin u dhaqaaqista ciyaaryahanka khadka dhexe xagaagan.
Toni Kroos iyo Luka Modric ayaa labadooduba galaya marxaladihii ugu dambeeyay ee waayahooda ciyaareed, laakiin khadka dhexe ee Real Madrid ayaa qaab ciyaareed fiican ku jira maadaama ay joogaan Federico Valverde iyo Eduardo Camavinga .
Ciyaartoyda kama dambeysta ah ee Champions League ayaa la rumeysan yahay inay u furan yihiin inay la soo saxiixdaan ciyaaryahan kale oo khadka dhexe ah xagaagan, inkastoo, Pogba ayaa lagu eedeeyay inuu yimaado Bernabeu haddii uu hoos u dhigo mushaarkiisa.
Warbixinta ayaa sheegeysa in PSG iyo Juventus ay horey miiska u saareen dalabyo, laakiin xiddiga reer France ayaa la filayaa inuu waqti ku qaato marka ay timaado go’aan ka gaarista dhaqaaqiisa xiga.
Pogba uma ciyaarin Man United tan iyo markii uu ka baxay guuldaradii 4-0 ahayd ee ka soo gaartay Liverpool bartamihii bishii April dhibaato kubka ah awgeed.
29-sano jirkaan ayaa seegay afartii kulan ee ugu dambeysay ee ay kooxdiisu la ciyaartay kooxaha Arsenal, Chelsea, Brentford iyo Brighton & Hove Albion.
Pogba ayaa dhawaan kor u qaaday soo kabashadiisa xerada tababarka kooxda, laakiin uma badna inuu ku lug yeesho kulanka ugu dambeeya ee Premier League ee ay la ciyaarayaan Crystal Palace May 22.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa sidoo kale dhaawac muruqa ah ku seegay horaantii xilli ciyaareedkan, lakiin waxa uu weli saftay 27 kulan heer kooxeed xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay hal gool, caawiyena ka noqday sagaal.
Wadar ahaan, Pogba ayaa Man United u matalay 233 jeer laba jeer oo kala duwan oo uu kooxda joogay, isagoo u dhaliyay 39 gool una diiwaan gashaday 51 caawin.
Laacibka reer France ayaa kaliya labo koob ku guuleystay waqtigii uu ku sugnaa Old Trafford, inkastoo uu kor u qaaday EFL Cup iyo Europa League intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2016-17.
Pogba waxa uu ku riyaaqay guulo badan intii uu ku sugnaa Juventus, isagoo kula guuleystay afar horyaal oo Seri A ah iyo laba Coppa Italia, waxaana la rumeysan yahay inuu doorbidayo inuu ku laabto Old Lady xagaagan.